Ungazifaka kanjani umbala izithombe ezimnyama nezimhlophe | Izindaba zamagajethi
U-Ignacio Sala | | Isithombe, Izifundiswa
Sonke sinesihlobo esikhulile, noma ngabe ogogo nomkhulu noma omalume ikakhulukazi, abasazohlangana nosuku olukhethekile, kungaba yisikhumbuzo somshado, usuku lokuzalwa noma yisiphi isizathu esisiphoqa ngokokuziphatha ukuthi senze isipho. Uma sifuna isipho sethu sibe esikhethekile, akukho okudlula izithombe.
Njengabantu asebekhulile, kungenzeka ukuthi inani elikhulu lalezi zithombe, ikakhulukazi ngenkathi zisencane, zimnyama futhi zimhlophe. Yize lezo zinhlobo zezithombe banentelezi ekhethekile, singayithinta ngokukhethekile nangokomzwelo ngokuthatha ikhefu leminyaka embalwa ngokubanika umbala.
Ngokusobala, angisho ukuthi sizinikezela nge-Photoshop ukuze sihambe ukufaka umbala endaweni ngayinye ezithombeni ezazicabanga imibala umbala wesithombe owawungaziveza, indlela eyasetshenziswa eminyakeni eminingi eyedlule ukufaka imibala kumafilimu amnyama namhlophe, umsebenzi owawuyisidina owawubandakanya ukudweba wonke amafreyimu efilimu (kwi-cinema 1 second kungama-24 ozimele) .
Ukuze ukwazi ukufaka imibala kuzithombe ezimnyama ezimhlophe, njengamafilimu amnyama amhlophe, okwamanje kungenzeka ngendlela esheshayo, ngoba iyalelwe ukuthi isoftware eqeqeshiwe (ukufunda okujulile) ukuthola ngokuzenzakalela izithunzi ezimpunga esithombeni bese uzihumushela kumbala we-spectrum (ubuhlakani bokufakelwa).
1 Digitize izithombe
2 Faka umbala izithombe ezimnyama nezimhlophe ngewebhu nge-Colourise
3 Faka umbala izithombe ezimnyama nezimhlophe kusuka kuselula yakho
3.2 Faka umbala (iOS)
3.3 Faka umbala izithombe (i-Android)
4 Faka umbala izithombe ezimnyama nezimhlophe nge-Photoshop
Kunezinhlelo zokusebenza / izinsiza eziningi zokufaka imibala kuzithombe ezindala, zombili ngendlela yezinsizakalo zewebhu nangendlela yezicelo zamadivayisi wedeskithophu namaselula. Kepha okokuqala, uma singenazo izithombe eziskeniwe Esifuna ukukuguqula ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lweGoogle's FotosScan, uhlelo olutholakala kuzo zombili i-iOS ne-Android.
I-FotoScan evela kwa-Google, iyasivumela skena izithombe ezindala ngekhamera yethu ye-smartphone, ukubakha, ngaphandle kokungeza ukucabanga nokukubuyisa ngangokunokwenzeka (ngaphandle kokwenza izimangaliso). Lolu hlelo lokusebenza luyatholakala ukulanda ngokuphelele mahhala ngezixhumanisi ezingezansi ze-iOS ne-Android.
I-FotoScan kusuka ku-Izithombe ze-Google
Uma sisebenzisa futhi Izithombe ze-Google, zonke izithombe izolayishwa ngokuzenzakalela kokuthi Izithombe ze-Google, ezizosivumela ukuthi sizifinyelele ngokushesha kusuka kukhompyutha yethu, uma sihlela ukusebenzisa insiza yewebhu noma uhlelo lokusebenza lwedeskithophu, ngaphandle kokuzithumela ngeposi, i-bluetooth, sizilande ngentambo kwikhompyutha yethu ...
Faka umbala izithombe ezimnyama nezimhlophe ngewebhu nge-Colourise
Njengamasevisi / izinhlelo eziningi ezisivumela ukufaka imibala ezithombeni ezimnyama nezimhlophe, sizohlala sithola imiphumela engcono uma sisebenzisa izithombe ngokulungiswa okuphezulu kakhulu. Isici esibalulekile esihlobene nobumfihlo, sikuthola ukuthi izithombe esizilayisha kule webhusayithi azihlali zigcinwe kumaseva, enye yezinkinga ezivamile zalolu hlobo lohlelo lokusebenza.
I-Colourise isebenza kalula. Kumele sihudule isithombe esifuna ukusiguqula siye kunxande okhonjiswa ekhasini lakho le-web, futhi linda imizuzwana embalwa ize ilayishwe ngokuzenzakalela futhi ifakwe umbala.
Faka umbala izithombe ezimnyama nezimhlophe kusuka kuselula yakho
I-MyHeritage uhlelo lokusebenza olutholakala kuzo zombili i-iOS ne-Android eziguqula ngokuzenzakalela izithombe zethu ezimnyama nezimhlophe zibe umbala. Lokhu akuwona umsebenzi oyinhloko walolu hlelo lokusebenza, uhlelo lokusebenza olwenzelwe ukudala izihlahla zomndeni, izihlahla lapho singasebenzisa khona izithombe esizifaka umbala ngazo.
Zonke izithombe esiziguqulayo, singabathumela ku-albhamu yethu yezithombe ukwazi ukuzisebenzisela noma iyiphi enye injongo engahlobene nohlelo. Okuwukuphela kwento kepha kufaka inganekwane encane enegama lesicelo yikona elingezansi kwesokudla lesithombe elisifakayo.
Lapho sesivule uhlelo, phakathi kwazo zonke izinketho uhlelo lokusebenza ezenza ukuthi sitholakale kuzo, chofoza Izithombe.
Okulandelayo, chofoza ku Ngeza izithombe futhi sikhetha ku-albhamu yethu yezithombe ukuthi yisiphi isithombe esifuna ukusifaka umbala.
Uma singakaze siyiskene phambilini, singayenza ngqo kusuka kuhlelo lokusebenza ngokuchofoza Skena izithombe nemibhalo (Yize imiphumela emihle izotholakala nge-Google's FotoScan.
Lapho isithombe esizofakwa umbala sitholakala esondweni sohlelo lokusebenza, chofoza kuso.
Ekugcineni, kufanele sichofoze kumbuthano onemibala osengxenyeni engenhla emaphakathi kwesikrini futhi ngemizuzwana kamuva ukuguqulwa kuzobe sekwenziwe.
Ukuze sikwazi ukuhlola umphumela, uhlelo lokusebenza lusikhombisa umugqa oqondile ohambayo esingakwazi suka kwesobunxele uye kwesokudla ukuze ubone ukuthi kwakunjani ngaphambi kokukufaka umbala nokuthi unjani ngemuva koshintsho. Ukuyigcina ku-albhamu yezithombe zethu, kufanele nje sichofoze kunkinobho yokwabelana, inkinobho esingayithumela ngayo nge-imeyili, WhatsApp noma olunye uhlelo lokusebenza esilufakile kudivayisi yethu.
I-MyHeritage: Isihlahla Somndeni/DNA
Faka umbala (iOS)
I-colorize kungenye yezinhlelo zokusebenza ezigxile ekusivumeleni ukufaka umbala ezithombeni ezimnyama nezimhlophe, izithombe ezindala njengohlelo olwedlule. Ku-App Store singathola ezinye izinhlelo zokusebenza ezisivumela ukufaka imibala ezithombeni ezimnyama nezimhlophe, kepha ikhwalithi yokugcina abayinikezayo iphansi kakhulu Angikhathazanga ukuyifaka kule ndatshana.
Lapho sesivule uhlelo lokusebenza, chofoza ku Skena noma ulayishe isithombe.
Ngemuva kwalokho sichofoza ku Ngenisa bese sikhetha isithombe somtapo wezincwadi esifuna ukusisebenzisa.
Ngemuva kwemizuzwana embalwa, kuthatha isikhathi eside uma kuqhathaniswa nezinye izinhlelo zokusebenza / izinsiza engikubonise zona ngenhla, izosethulela umphumela.
Lowo mfanekiso singakwazi ugcine it esondweni lethu noma wabelane ngayo ngqo nge-imeyili, WhatsApp noma olunye uhlelo lokusebenza esilufakile kukhompyutha yethu.
Faka umbala izithombe (i-Android)
I-colorize Izithombe ngesinye sezixazululo esinazo ku-Android engeza ukucwebezela kombala ezithombeni ezimnyama nezimhlophe. Lolu ukuphela kwesicelo esivumela ukuthi siguqule amanani athile ukuze sifake umbala esithombeni njengokuthile kokunikeza nokwehlukile, okuthi noma kuyiqiniso, kungazenzi izimangaliso, uma kusivumela ukuthola umphumela wokugcina ongcono Awujabuli ngokuguqulwa kokuqala kokuthi udale uhlelo lokusebenza.
Faka imibala ezithombeni
Umthuthukisi: Faka imibala ezithombeni
Faka umbala izithombe ezimnyama nezimhlophe nge-Photoshop
Ukubala izithombe ngombala omnyama nomhlophe futhi kulula kakhulu ngezinhlelo zokusebenza / izinsizakalo engiziphawule ngenhla. Yize ezimweni eziningi, umphumela ungaphezu kokumukeleka, kwesinye isikhathi kungenzeka kungamukeli. Kulezo zimo, kufanele shintsha ukufiphaza kwesithombe bese usebenzisa lezi zinsizakalo futhi.
Uma sinesikhathi, isikhathi esiningi, ukubekezela nolwazi lwe-Photoshop, singasebenzisa leli thuluzi elihle lokuhlela i-Adobe, a inqubo enzima futhi eyinkimbinkimbi ukuthi ngeke sichaze ngokujulile kule ndatshana. Kepha ukukunikeza umbono, ngezithombe ezinombala omnyama nomhlophe, kufanele sikhethe ngakunye zonke izingxenye zesithombe esifuna ukuzifaka imibala.
Lapho sesikhethe zonke izinto ezizoba nombala ofanayo, kufanele sakhe ungqimba wokugcwalisa umbala oqinile (leyo esifuna ukuyisebenzisa kuleyo ndawo). Ngoba lungisa umbala ube yizithunzi zesithombeKwiphaneli yezendlalelo kufanele sikhethe imodi yokuxuba umbala ukuze umbala uhambisane nento esiyikhethile.
Ekugcineni, kufanele silungise ukungafani kwazo zonke izindawo esizikhethile futhi sisebenzise ungqimba wombala ngokusebenzisa ama-Curves kuye lungisa abamnyama, ingxenye ebaluleke kakhulu yezithombe ezindala ezimnyama nezimhlophe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Isithombe » Ungazifaka kanjani umbala izithombe ezimnyama nezimhlophe